चिहानसम्म प्रेमीका साथमा |
चिहानसम्म प्रेमीका साथमा
इटालीका तानाशाह मुसोलिनीका दर्जनौँ प्रेमिका थिए । र, नष्टभ्रष्ट थियो उसको यौनजीवन । सुन्दरी क्लारा पेताची मुसोलिनीलाई यति माया गर्थिन् कि उनी उसका हरेक अपराध र गल्तीलाई माफ गरिदिन्थिन्। त्यति मात्र होइन, अन्तिम घडीसम्म उनले मुसोलिनीको साथ दिइन् ।
इटालीका फासिस्ट तानाशाह बेनिटो मुसोलिनीको जीवनमा थुप्रै स्त्री आए/गए । तिनताका इटालीका उच्च घरानिया स्त्रीहरू मुसोलिनी भनेपछि भुतुक्कै हुन्थे । संभ्रान्त वर्गका स्त्रीलाई बाल्यावस्थादेखि नै यसरी प्रशिक्षित गराइएको हुन्थ्यो कि उनीहरू सत्ता या समृद्धि हासिल गरेका पुरुषबाहेक अरूसित पे्रेमसम्बन्ध बनाउनु आफ्नो वंशीय शानविपरीत ठान्दथे । तर, आफ्नो यौनेच्छाको जाँतोमा नोकरचाकरजस्ता उँधो प्रजातिका पुरुषको घान हाल्न भने उनीहरूलाई केहीले रोक्दैनथ्यो । बस्, ती ‘नीच’ पुरुषहरू यी संभ्रान्त सुन्दरीका प्रेमलायक हुँदैनथे ।
मुसोलिनी कतिसम्म स्त्रीलम्पट थियो भने एकसाथ ऊ चौध प्रेमिका (अपि्रय भाषामा रखौटी) सँग रोमान्स गरिरहेको हुन्थ्यो । त्यसो त, इतिहास हेर्ने हो भने ‘एक नारी ब्रह्मचारी’ सूत्र पालन गर्ने तानाशाह नभेटिएला । धेरै स्त्री ‘गुटमुटाउनु’ हरेक तानाशाहको शक्तिउन्मादको प्रदर्शन हो । यसमा उसको यौनचाहना तीव्र र असाधारण हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन ।
भर्खरैजसो मुसोलिनीकी एक प्रेमिकाको डायरी सार्वजनिक भएको छ । मुसोलिनीलाई चिहानसम्म साथ दिने क्लारेता पेताचीले यस डायरीमा सन् १९३२ देखि ३८ सम्मको अवधिलाई लगभग मिनेट-मिनेटको वर्णनमा उतारेकी छिन् । डायरीका अधिकांश पाना मुसोलिनीको विष्मयकारी यौनजीवन र यहुदीप्रतिको उसको घनघोर घृणाले भरिएका छन् ।
क्लारेता (छोटकरीमा क्लारा) भेटिकन डाक्टरकी छोरी थिइन् । भनिरहनुनपर्ला, उच्च रोमन खान्दानकी थिइन् । उनका पिता पोपका निजी चिकित्सक थिए । मुसोलिनीलाई पहिलोपटक सन् १९३२ मा भेटेकी क्लारा त्यसवेला बीस वर्षकी थिइन् । मुसोलिनी भने उनीभन्दा दोब्बरभन्दा पनि बढी उमेरको थियो अर्थात्, उनान्चास वर्ष । चार वर्षसम्म मुसोलिनीसित उठबस (या लसपस) भए पनि सन् १९३८ मा मात्रै उनी मुसोलिनीकी घोषित प्रेमिका भइन् । सुरुमा, क्लाराजस्ती संभ्रान्त सुन्दरी मुसोलिनीजस्तो शक्तिशाली तानाशाहसँग आकषिर्त भइन् होला । युरोपको साम्राज्ञी हुने सपना पनि देखिन् होला । तर, कालान्तरमा उनी मुसोलिनीलाई सबभन्दा निस्वार्थ माया गर्ने प्रेमिका सावित भइन् । कम्युनिस्ट गुरिल्लाहरूले मुसोलिनी र क्लारालाई सन् १९४५ अपि्रल २७ मा कब्जा गरेपछि उनीहरूले क्लारालाई भने जीवनदान दिन खोजेका थिए तर उनले मुसोलिनीलाई छोड्न चाहिनन् । यसलाई इतिहासकारहरू क्लाराको बेजोड प्रेमको सबुत मान्छन् । उसो त, क्लाराको मुसोलिनीलाई नछोड्ने निर्णयलाई ‘हस्तिनापुरको राजको कुनै सम्भावना नरहेपछि चपरीमुनिको बास रोज्ने’ बाध्यताका रूपमा हेर्ने इतिहासकारहरू पनि नभएका होइनन् ।
मार्गरेता सारफाती मुसोलिनीको जीवनबाट बाहिरिएकै वर्ष, सन् १९३८ मा क्लारा मुसोलिनीकी घोषित प्रेमिका (मिस्ट्रेस) भइन् । धनाढ्य यहुदी वकिलपुत्री मार्गरेता बौद्धिक महिला थिइन् । उनी चर्चित कला-समीक्षक र पत्रकार थिइन् । समाजवादी श्रीमान् सिजारे सारफातीलाई छोडेर उनी मुसोलिनीकी प्रेमिका बन्न पुगेकी थिइन् । बौद्धिक महिलाका हैसियतले फासीवादको उत्थानमा अत्यन्त सहायकसिद्ध भएकी थिइन् उनी । सुरुमा फासीवाद यहुदीविरोधी थिएन । मुसोलिनीले अविसिनिया (हालको इथियोपिया र इरिटि्रया) कब्जा गरेपछि लिग अफ नेसन्स र अन्य देशले उसको कडा आलोचना गरे । उसको समर्थनमा जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर अगाडि आएपछि मुसोलिनीले हिटलरलाई गुनको पैँचो तिर्न सन् १९३८ मा नश्लवादी कानुन ल्याएको थियो । दुवै तानाशाह ‘संसारमा कमजोरहरूलाई बाँच्ने कुनै अधिकार छैन’ भन्ने गर्थे । ‘भेडा भेडासित बाख्रा बाख्रासित’ भनेझैँ हिटलरसित काँधमा काँध मिलाउँदै मुसोलिनी पनि यस कानुनमार्फत यहुदी-विनाशका लागि प्रतिबद्ध भएको थियो । यहुदी मार्गरेतालाई अब मुसोलिनीसँग बस्न सकस हुन थालेको थियो । मुसोलिनीले पनि उनलाई अविश्वास गर्न थालेको थियो । त्यसैले मार्गरेता १९३८ मा इटाली छोडेर उरुग्वे गइन् । मुसोलिनीको मृत्युपछि मात्रै इटाली र्फकेकी मार्गरेता प्रभावशाली कला-समीक्षकका रूपमा सम्मानित थिइन् ।
क्लारा मुसोलिनीको रंगीन स्वभावसित भलिभाँती परिचित थिइन् । उनी उसका गनिनसक्नु प्रेम-प्रकरण जान्दथिन् । तर, मुसोलिनी आफ्नो र मात्र आफ्नो होस् भन्ने नारीसुलभ कामना भने थियो उनको । उनी असाध्यै शंकालु र इष्र्यालु थिइन् । यति शंकालु कि उनी मुसोलिनीलाई दिनको कम्तीमा बाह्र/तेह्रचोटि घरमा फोन गर्न लाउँथिन् । ऊ अरू कसैसित त सल्केको छैन- यस शंकाले उनलाई हरबखत गाँजिरहेको हुन्थ्यो । आफ्नो डायरीमा आफूलाई कुन दिन मुसोलिनीले कतिपटक फोन गर्‍यो र फोनमा के कुरा भयो- तिनको समेत क्लाराले अभिलेख राखेकी छिन् ।
१९३८ को अपि्रल महिनाको एक दिन क्लाराले मुसोलिनी र उसकी पूर्वप्रेमिका एलिस दे पालोत्तेलीलाई रंगेहात (सम्भोगरत अवस्थामा) पक्रिइन् । एकरत्ति अपराधबोध नगरी स्तब्ध, क्रूद्ध र दुःखी क्लारालाई मुसोलिनीले भन्यो, ‘तिमीले थाहा पाइहाल्यौ, अब के नै लुकाउनु छ र ? मैले एलिसलाई सात/आठ महिनादेखि भेटेको थिइनँ । आज मलाई ऊसित भेट्न असाध्यै मन लाग्यो । मैले केही अपराध गरेको छैन । ऊसित म बाह्र मिनेट सुतेँ हुँला ।’ शुद्धि हराएजस्ती क्लाराले भनिछन्, ‘बाह्र होइन, तिमीहरू पूरै चौबीस मिनेट सुत्यौ ।’
नारीमनका लागि अत्यन्त असह्य यस्ता दर्जनौँ काण्डका बाबजुद क्लाराले मुसोलिनीलाई माया गरिरहिन्, अत्यन्त प्रगाढ माया । मुसोलिनीका एक-एक अपराध, एक-एक गल्ती माफ गरिरहन्थिन् उनी । प्रेम र समर्पणले मुसोलिनीलाई शिरदेखि पाउसम्म ढपक्कै छोपिदिँदा पनि ऊ भने हरपल अतिरिक्त नारी देहको खोजीमा हुन्थ्यो । त्यसो त, क्लाराले आफ्नो डायरीमा मुसोलिनी आफू भनेपछि भुतुक्कै हुने कुराको उल्लेख गरेकी छिन् । मुसोलिनी उनलाई पटक-पटक आफ्नो पागल प्रेम प्रकट गरिरहन्थ्यो । प्रायः ऊ भन्ने गर्थ्यो, ‘क्लारा ! म तिमीविना बाँच्न सक्दिनँ । तिम्रो सुन्दर र बान्की परेको देह देख्नासाथ मभित्र एकप्रकारको आगो सल्बलाउन थालिहाल्छ । अरू स्त्रीहरूको संगत गरेर मैले तिमीलाई तड्पाउनु हुदैनथ्यो । म मूर्ख हुँ । तिमीबाहेक अरूसित पनि सम्बन्ध राखेकामा मलाई पछुतो छ ।’
मुसोलिनीको यौनभोक बर्मुडाजस्तो थियो, कहिल्यै नअघाउने । कतिसम्म भने थिएटरमा कार्यक्रम हेरिरहँदा पनि ऊ यौनातुर हुन्थ्यो । क्लाराले लेखेकी छिन्, ‘एक दिनमा थिएटरमा उसले मलाई भन्यो, ‘पि्रय, मैले तिमीलाई मानसिक रूपमा यहाँ तीनचोटि नंग्याइसकेँ….. यो भीड नहुँदो हो त…..म भित्रभित्र सल्किरहेको छु…..तिमीलाई (शारीरिक रूपमा) प्राप्त गर्न लालायित छु म….।’
हिटलर र मुसोलिनी मनपेट मिल्ने दौँतरी भएका थिए । मुसोलिनी क्लारासँग हिटलरको कुरा गरिरहन्थ्यो । क्लाराले डायरीमा लेखेअनुसार मुसोलिनीका नजरमा हिटलर एक भावुक मानिस थियो । शाकाहारी जीवनशैलीका वकालतकर्ताहरूले भन्ने गरेका ‘शाकाहारीहरू अहिंसावादी र शान्तिप्रेमी हुन्छन्’ भन्ने ‘आग्रह’ लाई झुटो सावित गर्दै भूतो न भविष्यति खालको नरभक्षी भएको हिटलरलाई भावुक ठान्थ्यो मुसोलिनी । मुसोलिनी क्लारासित भन्ने गर्थ्यो, ‘फ्युरर (हिटलर) विशुद्ध रोमान्टिक मान्छे हो । ऊ दयालु र भावुक छ । मलाई भेट्दा उसका आँखा रसाएका थिए । मलाई असाध्यै मन पराउँछ ऊ ।’
मानिसले आफूलाई हिटलरको पिछलग्गुभन्दा भने ऊ आक्रोसित हुन्थ्यो । अगस्ट ४, १९३८ मा डुंगामा क्लारासित सयर गर्दै उसले भनेको थियो, ‘म उहिलेदेखि नश्लवादी थिएँ । यहुदीहरूलाई मैले सदा घृणा गरेको छु । मैले हिटलरको अनुशरण गरे भन्ने कुरा एकदम बकवास हो । मैले यहुदी-विनाशको कल्पना गर्दा हिटलर राजनीतिक रूपमा जन्मेको पनि थिएन ।’ इटालीका जनतामा नश्लचेतना भर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता रहेको ठान्ने मुसोलिनी क्लारालाई भन्ने गर्थ्यो, ‘यी घिनलाग्दा यहुदीहरूको आमविनाश नगरी हुँदैन । यिनीहरू इटालीका जनताका शत्रु हुन् । बसी-बसी खाने सरिसृप हुन् यी !’ सन् १९४३ मा इटालीमा करिब ३२ हजार यहुदी थिए । यीमध्ये करिब ८ हजारलाई मुसोलिनीले नाजी कन्सन्ट्रेसन क्याम्प (मृत्यु-शिविर) मा पठाएको थियो ।
यहुदीका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक हिसाबले मुसोलिनीलाई हिटलरभन्दा कम अतिवादी मानिन्थ्यो । तर, क्लाराको डायरीले हिटलरजस्तै मुसोलिनी पनि यहुदीलाई यस धर्तीमा बाँच्न अयोग्य ‘तल्लो नश्ल’ ठान्ने अतिवादी भएको प्रस्ट पारेको छ ।
इटालीको अफ्रिकी उपनिवेशमा इटाली जनताले अफ्रिकी जनतासँग सम्बन्ध गाँसेको कुराले उसलाई बौलाहाजस्तै बनाउँथ्यो । एक दिन उसले क्लारालाई भनेको थियो, ‘अफ्रिकाबाट आउने खबरले मलाई निकै क्षुब्ध बनाउँछ । आजै मात्र अफ्रिकी महिलासित घरजम गरेका पाँचजना इटालियनलाई गिरफ्तार गरिएछ । यी फोहोरी इटालियनहरू ! महान् इटालियन साम्राज्यलाई यिनीहरू केवल सात वर्षमा ध्वस्त पारिरहेका छन् । यिनलाई आफ्नो नश्लको कुनै हेक्का छैन ।’
क्लारा पेताची र मुसोलिनीलाई १९४५ अपि्रल २७ मा कम्युनिस्ट गुरिल्लाले बन्धक बनाए । इटालियन सोसियल रिपब्लिकका केही सदस्यसहित भागिरहेका थिए उनीहरू । क्लारालाई गुरिल्लाले बाँच्ने अवसर दिए पनि उनी मुसोलिनीलाई छोड्न तयार भइनन् । अपि्रल २८ का दिन मेजेग्रा नामक स्थानमा दुवैलाई गोली हानेर मारियो । भोलिपल्ट यी दुईको लासलाई मिलान लगियो र एक पेट्रोलपम्पअगाडि खुट्टा माथि र टाउको तल पारेर झुन्ड्याइयो । चमेराजसरी झुन्डिरहेका यिनका लासमाथि उत्तेजित भीड गाली गरिरहेको थियो, आक्रोश पोखिरहेको थियो ।
« राजनीतिक हिरो र रिलको हिरोइन हिरोइनका चिसिएका सम्बन्ध »